Microfinance Delta International Company Limited (MIFIDA) ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရေဦးတန့်ဆည် ဌာနခွဲ အတွက် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအား ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
*Account Officer (၁) ဦး
*MIS Officer (၁) ဦး
*Client Service Officer (၅) ဦး
1. အသက် (၂၃ – ၃၀) ကြား
2. တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု ဘွဲ့ရရှိထားသူ
3. တွက်ချက်မှုနှင့် အခြေခံစာရင်းကိုင်ပညာ နားလည်သူ
4. သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ၊ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ရှိသူ
5. ဆိုင်ကယ်စီးကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
6. Microfinance လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူ နှင့် ဒေသခံများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေနှင့်နှုတ်ဖြေအားစစ်ဆေးခန့်အပ်သွားပါမည်။
(၆) လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အပြည့်အစုံ CV၊ ပညာအရည်အချင်း မိတ္တူ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း (၃) လ အတွင်း၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာမူရင်း (၃) လ အတွင်း၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူအပြည့်အစုံဖြင့် (၃၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဒေါ်ခင်ချိုလင်း (Regional Manager) ၏ mail address (khincholinn@mifida-myanmar.com) သို့ ပေးပို့ပြီး (Ph No: 09-969910227) သို့လည်း ဆက်သွယ်၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။